YT-220/360/450 SQUARE BOTTOM PAPER BAG MACHINE
1.Neiyo yekutanga Germany SIMENS KTP1200 yemunhu-komputa yekubata skrini, zviri nyore kushanda uye kutonga.
2.German SIMENS S7-1500T inofamba inodzora, yakasanganiswa neprofinet Optical fiber, chengetedza muchina nekumhanyisa kumhanya zvakatsiga.
3.German SIMENS servo mota yakabatanidzwa neyekutanga Japan Panasonic foto sensor, ichienderera ichiruramisa padiki pepa rakadhindwa chaizvo.
4.Hydraulic kumusoro uye pasi dandemutande anosimudza dandemutande, inosanganisirwa neyekugara kunetsekana kudzora kusunungura system.
5.Automatic Italy SELECTRA Webhu guider seyakajairwa, ichienderera ichiruramisa idiki diki yekuyananisa misiyano nekukurumidza.
Kuenderera mberi kufora nebhegi mubato kugadzira bhegi rine mubato
Properties uye zvinoshandiswa
Muchina uyu wakagadzirwa kugadzira mativi epasi mabhegi asina mabato kubva mupepa roll, uye chishandiso chakanakira kuburitsa diki-saizi bhegi nekukurumidza. Nekuteedzera matanho anosanganisira kudyisa mapepa, chubhu inoumba, kutema chubhu uye pasi kuumba mukati, muchina uyu unokwanisa kuchengetedza mari dzevashandi. Iyo yakashongedzwa photoelectric detector inogona kugadzirisa kucheka kureba, kuitira kuve nechokwadi chekucheka kunyatso. Iyo yakashongedzwa Germany REXROTHPLC sisitimu uye yakafambira mberi kumberi dhizaini dhizaini chirongwa icho chinoona muchina kuti uite nekukurumidza uye mushe. Iyo yemunhu yakagadzirirwa dhizaini yekuunganidza uye kuverenga basa kunatsiridza kurongedza kushanda. muchina uyu unogona kugadzira mabhegi epepa rakatetepa, nekudaro inonyanya kukodzera kuiswa muzvinhu zvekudya kurongedza.
6.This ndiyo webguide mechine yakaitwa naRe Controlli lndustriali muItari.Pakati pekugadzirisa izvo zvinhu zvinofanirwa kunge zvakanyatsoenderana kubva mukusunungura kusvika kudzoreredzo, izvo zvakakosha zvikuru kugadzirisa kugadzirwa kwekuita uye kuona mhando yechigadzirwa. RE`s webguide muchina wakavimbika uye nyore kushandisa, kwayo actuator inoshandisa yekutsika mota uye inovimbisa nekukurumidza uye chaiko.
Iyi inorema sero (tension sensor) kubva kuRe Controlli lndustriali muItari, ichishandisa kuyera chero shanduko dzisingaoneki mumakakatanwa ezvinhu mune yekumanikidza kwezvinhu otomatiki control system.
T-one tension controller kubva kuRe Controlli maindasitiri muItari. Iyo yakasanganiswa, yakadzika, ine chirimwa cheindasitiri.
Iyo T-imwe inodzora ine tension sensors uye brake inoumba ino shungu tension kudzora system, Iyo inoshandisa yayo yepamberi mapaneru kudzora ekugadzirisa parameter uye kuronga uye kuenzanisa chiridzwa icho pachacho, icho chiri nyore kwazvo kushandisa.
Iyo yepamoyo microprocessor inoshandisa PID algorithm yekuchengetedza kusagadzikana kwezvinhu kuve kwakadzikama pane kukosha kwaunoda.
Iyi ndiyo yeItaly RE pneumatic brake pane iyo unwinder. Iyo inoumba kusanzwisisika kwezvinhu zvekushandisa otomatiki kudzora system ine tension controller, eg T-ONE- uye tension sensors Iyo inoshandisa dzakasiyana torgue brake calipers (100%, 40%, 16%), kuti igone kushandiswa kune akasiyana akasiyana kushanda mamiriro uye kunyatso kugadzirisa kusagadzikana kwezvinhu.
Kucheka kureba kwepepa bhegi
Pepa bhegi upamhi
Pepa bhegi repasi upamhi
Pepa mupumburu upamhi
Rongedza mapepa dhayamita
3Mutsara 4line 380V 14.5kw 3Mutsara 4line 380V 14.5kw 3Mutsara 4line 380V 14.5kw
Nzira yekumashure yekuvhara (threekinds)
Servo chigunwe checheka In In In
Chikwata uye banga rakapetana
* 1. Jerimani SIMENS inobata skrini yemunhu-komputa interface control system, inoshanda nekungotarisa.
*2. With Germany SIMENS Motion controller (PLC) inosanganisirwa ne100M Optical fiber kudzora kufamba kwese. Iyo SIMENS servo mutyairi inosangana netambo yemagetsi kutora kutonga kweiyo servo mota oparesheni. Ivo zvikamu kuti vaone muchina nekumhanyisa kumhanya uye yakakwirira chaiyo yekufamba inodzora.
* 3. France SCHNEIDER yakaderera magetsi magetsi element, surly inovimbisa muchina nehupenyu hwakareba uye kudzivirira chero kusagadzikana pasi pechimhanyisa kumhanya kumhanya.
*4. Yakazara yakavharidzirwa isina guruva-isina magetsi bhokisi
*5.With hydraulic kumusoro uye pasi zvinhu anosimudza, zviri nyore kuchinja pepa roll uye kusimudza bepa kumonera kumusoro uye pasi. Iine auto min roll roll alarm basa, muchina unomhanyisa pasi otomatiki wobva wamira.
*6. With Itari Re kugara kunetsekana kudzora system, chengetedza kusagadzikana kudzora uye kwakarurama.
*7. With Italy Re ultrasonic kumucheto alignment sensor，yakasununguka kubva pesimba rechiedza uye guruva mamiriro, kuti uwane yakanyanya kujeka uye yepamusoro chaiyo. Iyo yakagura nguva yekumira uye ichideredza marara epfuma ..
*8. Otomatiki Itari Re guider seyakajairwa, ichienderera ichiruramisa kushoma kusiyanisa kwekusiyanakutsanya. Nguva yekupindura iri mukati me0.01s, uye kunyatsoita kwe0.01mm.Inodimbura nguva yekumisikidza uye nekurasa marara ezvinhu.
Tubhu Kugadzira CHIKAMU
*9. Iine gluing kamwene yedivi kunama. Iyo inokwanisa kugadzirisa izvo zvinoburitsa zveglue, uye kugadzira iyo glue yakatwasuka. Inoshanda uye ine hupfumi.
* 10. Yakakwira kumanikidza gluing chitofu tangi yedivi uye yepasi glue kuendesa, zviri nyore kushandisa uye zvakanyanya kudzora basa rekuchenesa uye zvakare kunamatira glue yekumhanyisa kumhanya inodzorwa neyakaenzana, yekumhanyisa shanduko otomatiki zvinoenderana nemuchina unomhanya kumhanya.
* 11 Iine yekutanga Panasonic pikicha yekunzwa, ichienderera ichiruramisa padiki pepa rakadhindwa chaizvo. Kana paine mhosho dzinouya, muchina unomira wega. Izvi zvinobatsira chaizvo kudzikisa isina kukodzera chigadzirwa chiyero.
*12. Iine yakakwira chaiyo yekuparadzira giya inoenderana nehupenyu hwakareba hwebasa, hapana kuzunungusa panguva yekumhanya. Kunyatsoita uye nekukurumidza uye nekukurumidza.
*13. Iine otomatiki lubricating system inoita kuti chijairo Kugadziriswa kuve nyore. Iyi sisitimu inozozadza giya rese otomatiki kana muchina uchimhanya.
BHAgi PASI RINOGADZIRA CHIKAMU
*14. Inowanikwa Jerimani SIMENS servo mota kudzora kureba kwepepa bhegi. Cheka pombi chubhu nebanga rezino kana banga rakasarudzika mune yakatenderera yunifomu kutenderera, chengetedza iyo incision kunyange uye yakanaka.
* 15. Bhegi repasi rinoumba chikamu.
* 16. Muchina unouya pamwe nekugadzirwa kwechigadzirwa uye huwandu hweanoshanda chiratidzo nekumisikidzwa pane yemunhu-komputa interface. Inobatsira kutora chigadzirwa, zviri nyore uye nenzira kwayo.
Main Electrical Zvikamu Kugadziridza
Yevanhu-komputa inoteerera yekubata skrini
PLC Chirongwa CheMota Anodzora
Traction Servo mota
Traction Servo Motor mutyairi
Gamuchira Servo Motor
Gamuchira Servo Motor mutyairi
Photoelectric kudhinda chiratidzo yekutevera sensor
Yakadzika magetsi emagetsi zvishandiso
EPC uye Makakatanwa Kudzora system
Weber mutungamiriri anotungamira
Weber guider Servo mota
Pepa mupumburu unosunungura mweya shaft
Yapedza bhegi rekutakura bhandi
Pazasi glue mudziyo
yakakwirira yakanyatsogadziriswa Glue kamwene yepakati mvura-yakavakirwa glue
Yakakwira kumanikidza glue tangi yepakati Mvura-yakavakirwa glue kuendesa
Mould nokuti bhegi chubhu Anoumba
rabha vhiri rekutsikirira bepa
Cherechedzo: Icho chinhu chinotsiviwa neyakaenzana chikamu chemuchina unoenderera kumusoro wakakwenenzverwa. Isu tinochengeta chiremera, uye hatichaitazve chirevo.
Pashure: Guowang otomatiki Hot angazvidzvisa-tsikwa Machine
Zvadaro: STC-1080G otomatiki Yekumhanyisa Yekumhanyisa Window Kubata Machine
Otomatiki Pepa Bhegi Kugadzira Machine
Otomatiki Kutenderera Kudya Bhegi Kugadzira Machine
Pepa Bhegi Kugadzira Machine
Roll Yekudya Bhegi Kugadzira Machine
Kutenderera Kupa Pepa Bhegi Machine